Hay’adda Socdaalka iyo Jinsiyadaha Soomaaliya oo tababar usoo gabagabeysay Saraakiil ka tirsan Hay’adda(Daawo Sawiradda). – Radio Muqdisho
Hay’adda Socdaalka iyo Jinsiyadaha Soomaaliya oo tababar usoo gabagabeysay Saraakiil ka tirsan Hay’adda(Daawo Sawiradda).
Madaxweynaha Koonfur Galbeed oo qaabilay Wafdi ka socda Hay’adda Tadamun
Tababarkan lagu baranayey sidii loo maarayn lahaa xuduudaha dalka iyo muhaajiriinta soo qulqulayaa oo 3beri kasoconayey bosaso ayaa lasoo gabgabeyey waxaana kafaaiidaystay saraakiil socday dowlada federaalka soomaaliya iyo dowlad goboleedyada xubnaha ka ah ee kahawlgala garoomada diyaarada dekeda iyo xuduudaha dhulka.
Tababarkan oo ay iska kaashadeen hay’ada laant socdaalka iyo jinsiyada qaranka Soomaaliya iyo hayada qaxootiga ee iom ayaa ah mid korloogu qaadayo aqoonta saraakhiisha kashaqeeya xaduudaha dalka ee kala ah Dhulka cirka iyo badda.
Agaasimaha Laanta Socdaalka iyo Jinsiyada garoonka diyaarada Bossaso C/nuur Maxamed Jaansaar oo faahin kabixiyey tababarkan waxa uu sheegay in tababarada noocan ah xooga lagu saarayo sidii saraakiisha loo bari lahaa qabashada dadka sida sharci darada ah dalka kusoo gala.
Axmed Raage oo ah Taliye kuxigeenka Hay’ada Socdaalka iyo Jinsiyada Soomaaliya ayaa sheegay in jamhuuriyada federaalka soomaaliya ay tababaradii dalka dibadiisa loo aadi jirey ay usoo weecisay degmooyinka dalka si muwaadiniinta Magaalooyinkooda wax loogu baro
Duqa Boosaaso C/salaan Bashiir C/salaan iyo Gudoomiyaha Gobolka Bari Yuusuf Maxamed Wacays dhedo ayaa laanta socdaalka iyo jisiyada soomaaliya ku amaanay dadaalada dheeriga ee ay kubixinayaan sidii loogu shaqeyn lahaa Umada Soomaaliyeed maadaama Magaalooyinka Waaweyn ee dalka aysi isku mid ah muwaadinintu Baasaboor somaaliga iyo adeegyada kale uga qaataan.
Saraakiish tababarka qaatay ee kasocday dowlada federaalka iyo Dowlad Goboleedyada xubnaha ka ah ayaa sheegay iney tababarkan kubarteen aqoon aysan horay ulaheyn ayna uga faaiidayn doonaan dadka kunool deegaanadii ay ka shaqaynayeen.
Tababarkan ayaa kamid noqonaya dadaalo hay’ada laanta socdaalka iyo jinsiyada dowlada federaalka soomaaliya ay ku doonayaan in latayeeyo shaqaalaha Dowlada ee kashaqeeya Xaduudaha Dalka.
Ayaan C/qaadir Cali oo kasocotay hayada Laanta Socdaalka Iyo Jinsiyada Degmada Dhoobley Ee Gobolka jubbada Hoose ayaa sheegtay in tababarkan uu yahay mid qiimo gaar ah uleh’ Sababta ayeyna Kutilmaamtay iney kasocotay dhanka xuduudaha Deegaankeeda looga baahanyahay sidii loomaarayn lahaa Muhaajiriinta xuduudka kasoo gelaya.
Wasiirka Amniga” goobaha ugu horeeya ee Ciidamada AMISOM lagala wareegayo waxaa ka mid ah Stadium Muqdisho+Sawirro
Gudiga Wacyi gelinta taakulaynta Ciidanka Qaranka oo la hadlay Soomaalida Ohio (Daawo Sawiradda)
Wafdi ka socda Hay'adda Wadaniga ah ee Tadamun oo ka shaqaysa arrimaha bulshada sida Waxbarashada, Caafimaadka, Biyaha, Howlaha Gargaarka iyo...